Qoyskaygu ma ogola iskutaga jinsiga isku mid ka ah ama dharka dumarnimada leh, Icaawi! - Youmo
Qoyskaygu ma ogola iskutaga jinsiga isku mid ka ah ama dharka dumarnimada leh, Icaawi!
Min familj accepterar inte homosexualitet eller feminina kläder, hjälp! - somaliska
Anigu ma muujin karo qofka aan ahay qoyskayga dhexdiisa. Iyagu ma aqbalayaan in aan ku labisto midabka basaliga ama rooseetada ee dharka gabdhaha. Waxay aaminsan yihiin in aanay aniga igu haboonayn maadama aan ahay wiil. Marka aan u labisto sida anigu aan doonayo waxa igu dhacaya in la i fogeeyay oo la ii hanjabay.